လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဈေးနှုန်း - Brain On Porn
NEW SMYRNA BEACH - ပုံမှန်ပုံပြင် - ပေတရုသည်အိမ်ထောင်သည် ၃၅ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဇနီးဆူစန်သည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာရက်ပေါင်းများစွာလမ်းပေါ်တွင်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအထိသူတို့၏လိင်ဘဝသည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကြောင်းနှင့်ပေတရုဘာဖြစ်ခဲ့မည်ကိုမသိရှိပါ။
သူတို့သည်အလုပ်ပေးမယ့်ခဲ့ကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုအိပ်ရာထဲမှာခုန်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေခဲ့သည်ကိုသိသောကြောင့်, သူ Janet အိမ်ပြန်ခဲ့ရက်ပေါင်းမျှော်လင့်လေ့ရှိတယ်။
တောင်မှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်နှစ်ခုအမြဲ lovemaking ဘို့အချိန်နှောင်းပိုင်းတွင်ညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေနံနက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော် Janet နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်း, ပေတရုအော်ဂဇင်ရောက်ရန်ရုန်းကန်ရသောအခါဤသည်နေ့ရက်ကာလ။ သူကပင်ဖွင့်နှင့်အတူအမှုအရာကျော်ရရန်, orgasm ကိုအတုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဘယျသို့ပတေရုသကိုနားလည်မပေးနိုငျသူဆူပုအပေါ်အခါသူကမှန်မှန်မကသူ့အကြိုက်ဆုံး porn ဆိုဒ်များ-တစ်ခုခုပေါ်တွင်တွင်းသို့လာသောအခါသူသည်အဆင်သင့်ဆန္ဒရှိနှင့်နိုင်ကြမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လမ်း-ဒါပေမဲ့သူပိုင်ခွင့်ရှိအစစ်အမှန်အရာလေရဲ့သောအခါထိုအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး သူ့ရှေ့မှာ။
ပတေရုသညျမိမိဇနီးနှင့်အတူ "ပျင်း" သည်မဟုတ်ဟုထဲမှာအတော်လေးရှင်းပါတယ်, သူသည်သူမ၏တွေ့ပါဆက်လက် "sexy စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်နှိုးဆွ။ "
ပေတရု, နှောင့်နှေးသုက် (DE) မှလူအများစုနားလည်သဘောပေါက်ထက်ပိုပြီးအဖြစ်များကြောင်းပြဿနာတစ်ခုခံစားနေရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ DE ၏ရောဂါလက္ခဏာများပါဝင်သည်: အော်ဂဇင်ရောက်ရှိရန်ပုံမှန်ထက်ပိုကြာ; သာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေတစ်ဆင့် orgasm ရပြီးရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း, လူအပေါင်းတို့မှာအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
“ ကြာရှည်သည်” သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပျော့စားလက္ခဏာအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်အစပိုင်းတွင်ပေတရုစိတ်မပျက် သူသည်ယခုအခါသူသည်ဆူဆန်အားနှစ်သက်လာသည်ဟုထင်ပြီးချစ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်ရင့်ကျက်လာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
New Smyrna သဲသောင်ပြင်၏အကြံပေးစင်တာမှစိတ်ပညာရှင် Dr. Anthony Capozzi ၏အဆိုအရ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအားလုံးကဲ့သို့ပင် ED နှင့် DE ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရင်းများစွာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းခြင်း / ချို့ယွင်းခြင်း၊ နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အများအားဖြင့်အော်ဂဇင်ကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဟုလူသိများသော SSRI အခြေပြုစိတ်ကျဆေးများအသုံးပြုခြင်း၊ ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာပြorနာများသို့မဟုတ်မိသားစုကမောက်ကမဖြစ်မှုများကဲ့သို့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ - အားလုံးသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကအမျိုးသားများအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံပျံ့လွင့်စေနိုင်
ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တဦးတည်းကိုတိုးမှတ်တမ်းတင်အကြောင်းမရှိတဲ့မူလတန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်အဖြစ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့နှင့်အတူ Over-ပါဝင်ပတ်သက်မှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောပတေရုသအဖြစ်အသက်တာ၏ချုပ်ထဲမှာမဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျားများအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိတရားခံပုံရသည်။
ဒါဟာအိမ်တွင်းကွန်ပျူတာများ, Laptop, စမတ်-ဖုန်းများနှင့်ကျနော်တို့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသယ်ဆောင်သည်အခြားမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်ဝင်ရောက်သည့်, လက်လှမ်းတတ်နိုင်နှင့် ပို. ပို. ဂရပ်ဖစ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း, အခြို့အဘို့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများမသာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုပုံပေါ်ပေမယ့် ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်လိင်စွဲလမ်းမှုကုသမှုနယ်ပယ်၌များစွာသောသူတို့သည်အချိန်ကာလအတော်အတန်သိသောအရာများကိုအတည်ပြုပေးသည်။ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများနှင့်အကျိုးဆက်များတွင်လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်လိင်၊ ကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများကိုအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ပင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း၊ / သို့မဟုတ်ရေရှည်လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။
ဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြင်အာရုံနှင့်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်သည့်ထက်ကသူ၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖွယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ porn မှ masturbating နှင့်ကူးယဉျကသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏ 75% သုံးစွဲသူ (ငယ်ရွယ်သော, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ကွဲပြားခြားနားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအဆုံးမဲ့ပုံရိပ်တွေ) ဖြစ်ပြီး, သူ၏ခေါင်းကိုအတွက်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပစ္စည်းအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေး။
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ယခုမြင်နေကြပါသည်ကတိုတောင်းဘို့ DE သို့မဟုတ်ယင်း၏ပိုကောင်းလူသိများဝမ်းကွဲ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် ED ဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်တငျပွကွောငျးအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတစ်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ဖြစ်ပါတယ်။
•သူတို့ဟာညစ်ညမ်းနှင့်အတူစိုက်ထူသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ရရှိမျှပြဿနာရှိသည်, ဒါပေမယ့်လူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးဆန္ဒရှိအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူ, သူတို့ကတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရုန်းကန်;
•သူတို့ကလိင်ရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ကြသည်, ဒါပေမယ့်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိရှည်တွေအများကြီးကြာနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်သူတို့ disengaged ပုံပေါ်ကြောင်းညည်းညူ;
•သူတို့ကတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူထိနျးသိမျးနိုငျ, ဒါပေမယ့်သာမိမိတို့ခေါင်းပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ကလစ်ပ် replaying အားဖြင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်;
•သူတို့ကကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ-ပေမယ်စိုက်ထူခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ဆီသို့တစ်ဦးလိုအပ်သော tool အဖြစ်တစ်ခုရံဖန်ရံခါ addendum အဖြစ် porn-မဟုတ်စောင့်ကြည့်မှာသူတို့ကို join ဖို့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မိတ်ဖက်ဖိတ်ခေါ်;
•သူတို့က ပို. ပို. ပို. ပြင်းထန်သောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရှာဖွေတာ, အမှန်တကယ်လိင်ဖို့ "porn လိင်" ကြိုက်တတ်တဲ့;
•သူတို့အပြစ်ရှိတယ်လို့နှင့်ကှာခံစားချက်တွေကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက် (စသည်တို့ကို porn, မြင်ကြပုံများ, မှာရှာဖွေနေအချိန်ပမာဏ), ကနေလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ပြီ
•သူတို့အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်သူတို့နှင့်တူခံစားရရန်အစဖြစ်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ "အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ "
သင်ဟာတစ်ဦးက Porn Diet Need ပါသလား
ဒါဟာ porn-သွေးဆောင် DE ခံစားနေရသူကိုလူတိုင်းကအပြည့်အဝ-လွ porn စှဲလမျးသူကြောင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအလွန်အနည်းဆုံး porn စွဲရန်ရှေ့ပြေးအဖြစ်ရှုမြင်ရပါမည်။ porn ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ရေရှည်မိတ်ဖက်ပြဿနာတက်ရှင်းလင်းရေးလျှင်ကြည့်ဖို့ 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ porn နှင့်ကနေသက်သာစဉျးစားသငျ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်သူကိုတစုံတယောက်သောသူသည်။ ဒါကြောင့်မပါလျှင်, ထိုကြီးမြတ်ပါတယ်။
ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီထို့နောက်ကွာ porn နှင့်နိုဝငျဘာလရှောင်ပါလျှင်, သူ့လိင်ဘဝချောဖြစ်သင့်တယ်။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်နိုဝငျဘာလ abstinence ၏ 30 ရက်ပေါင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရသောအရာထမလျှင်, တစ်ဦးချင်းစီမူလအစအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောအကြောင်းရင်းများအတွက်နက်ရှိုင်းကြည့်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဒေါက်တာရောဘတ် Kennerley, CCNSB မှာစိတ်ပညာရှင်အဆိုအရ "ကပြဿနာ porn စွဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်လှည့်လျှင်, တစ်ဦးချင်းစီကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ရှိသမျှစှဲကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစွဲကပိုပြီးခက်ခဲသည့်သဘာဝကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အောင်အကျိုးကို system ထဲမှာဦးနှောက် rewires လိင်ကနေအပျော်အပါး "အပါအဝင်အပျော်အပါး။
ဒေါက်တာ Kennerley စွဲပြဿနာကိုနေ့ချင်းညချင်းကိုယ်နှိုက်ကကုစားဖို့မြျှောလငျ့မထားသင့် "ကြောင်းပြောပေါ်တတ်၏။ တကယ်တော့, neuroscience စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအားဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်အခါက "ပုံမှန်ဖို့, ဦးနှောက်ထဲမှာ dopaminergic သို့မဟုတ်အပျော်အပါးလမ်းကြောင်းများအတွက်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာနိုင်ပါတယ်ကိုပြောပြသည်။
•အကျိုးဆက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖန်ဆင်းတော်ကတိတော်များရှိနေသော်လည်းအဆက် porn အသုံးပြုခြင်း,
•တဖြည်းဖြည်းပို arousal ပြင်းထန်သော, သို့မဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်း,
•လျှော့ချသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအတွက်ပင် Non-တည်ရှိအကျိုးစီးပွား;
porn အသုံးပြုမှုနှင့် တွဲဖက်. •မူးယစ်ဆေး / အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး / အရက်စွဲ relapse •ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများထက်ကလူအဖြစ်ကသူတို့ကိုကြည့်ရှု, တကျွန်းတနိုင်ငံသား objectification တိုးမြှင့်;
•ပြည့်တန်ဆာရှာတွေ့မှအမည်မသိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်-ups အဘို့အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. နှင့် Two-ရှုထောင်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရာမှစက်လှေကား။
သူတို့မပျော်ရွှင်နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ဖျော်ဖြေဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏နောက်ခံအရင်းအမြစ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကြည့်ရှုကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝမ်းနည်းစရာ, porn စွဲမကြာခဏအကူအညီရှာတွန့်ဆုတ်နေကြသည်။
အခြားသူများကရိုးရိုးလည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်။ ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကူအညီရှာအံ့သောငှါပြုကြသောအခါ, သူတို့မကြာခဏသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းရဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအကူအညီနှငျ့မဟုတ်ပြဿနာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အလားအလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ related penile ယားယံအကြောင်းကိုမေးရန်, သို့မဟုတ် "ဆက်ဆံရေးမျိုးပြဿနာများအတွက်အကြံပေးခြင်းရှာဆရာဝန်တစ်ဦးကိုယ်တိုင်က-သွားရောက်လည်ပတ်ရှာကြာလော့။ "
ဝမ်းနည်းစရာ, များစွာသော porn စွဲညစ်ညမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်ဆွေးနွေးခြင်း (သို့မဟုတ်ပင်အကြောင်းမေးခံရ) ခြင်းမရှိဘဲကျယ်ပြန့် psychotherapy တက်ရောက်ရန်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အမာခံပြဿနာမြေအောက်နှင့်တည်းကကုသမှုမရှိဘူးဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။
အားလုံးပညာရှင်များ arousal / အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ-အတွက် psychotherapy, လိင်ကုထုံးနှင့်အတူယောက်ျားကုသနှင့်ဆေးဝါး porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လယ်ကွင်း-ရှိသည်။
porn စွဲအဝတ်မခြုံဘဲနေလျှင်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်လိုင်စင်ကုထုံးနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အကြံပေးခြင်းမကြာခဏစုံတွဲများကုထုံး, အုပ်စုတစုအလုပ်နှင့်တစ်ဦး 12-အဆင့်ပြန်လည်နာလန်ထူ program နဲ့အသုံးဝင်သည်မှန်လျှင်, ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လိုအပ်ပါသည်။
ကြောင်း porn စွဲမှတ်ထားပါရန်အရေးကြီးပါသည်ကအများဆုံးမကြာခဏကျော်လွှားဖို့ရေရှည် psychotherapy နှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောရငျးနှီးကိုကြောက်ရွံ့အဖြစ်နောက်ခံစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, တစ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤ psychotherapy နှင့်ထောက်ခံမှုသာပစ္စုပ္ပန်ပြီးနောက်အောင်မြင်သောနိုင်ပါတယ် အမူအကျင့်ကိစ္စဖော်ထုတ်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
သင်ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုချစ်တစ်စုံတစ်ဦးက Porn စွဲသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလိင်စွဲလမ်းအဖြစ်စွဲမဆိုအမျိုးအစားနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြောင်းခံစားရလျှင်, လောင်းကစား, မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။ စွဲကု သ. ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။